Malaysia Oo Ka Jawaabaysa Xaaladda Bini’aadanimo Ee Badda Ku Haysata Muslimiinta Rohinga | Duul News International
Malaysia Oo Ka Jawaabaysa Xaaladda Bini’aadanimo Ee Badda Ku Haysata Muslimiinta Rohinga	(Duulnews)-Ra’iisul wasaaraha Malaysia, Najib Razak, ayaa sheegay inuu amray howlgal badbaado iyo baadigoob ah oo lagu badbaadinayo kumanaan muhaajiriin ah oo badda ku xanibmay.
Badi dadkaasi ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Muslimiinta Rohingyas ee Myanmar iyo Bangladesh.
Malaysia iyo dariskeeda ayaa horay u celiyay doonyaha dadku saarnaayeen balse badalay mowqifkooda si ay uga jawaabaan walaaca kordhaya.
Arbacadii ayey Malaysia iyo Indonesia ku heshiiyeen in muhaajiriinta loo ogolaado inay soo dagaan, lana siiyo hoy kumeel gaadh ah.
Wasiiradooda arrimaha dibadda ayaa diyaarinaya wadahadalo ay la yeeshaan mas’uuliyiinta Myanmar oo diiday in qowmiyadda Rohingyas ay ka cararayaan cadaadis.
Dhinaca kale, Australia ayaa sheegatay in qaxootiga Rohingyas ee doonyaha ku yimaada loo ogolaaneyin daganaasho. Ra’iisul wasaare Tonny Abbot ayaa sheegay inay muhiim tahay in la joojiyo dadka tahriibaya.